Izinkampani ze-cannabis zikuhweba kanjani amasheya insangu?
Izinkampani ze-cannabis zenza kanjani amasheya?
UThomas Howard, owayengumthengisi wamasheya nommeli wamanje we-cannabis uyachaza.
I-Rising Star kanye ne-Lawyer Ehlumayo, etholwa yi-2% kuphela yabameli abathola. Ukuzijwayeza ukumangalelwa kwenkontileka ngokugxila emabhizinisini we-cannabis.
Usuku ngalunye, ngiphendula umbuzo owodwa wamahhala ophathelene nezinkinga zomthetho.
Buza okwakho namuhla.
Izinkampani ze-Marijuana zidlula eCanada zisiya eMarkets.
Ukusebenza noTom Howard bekukuhle. Usisize ukuthola indlela yenkontileka yezindlu, futhi wayenolwazi olukhulu futhi olusizo!
Ukubonisana kwamahhala nommeli wezoLimo wase-Illinois
Thumela i-imeyili Manje
Cha ngiyabonga, angifuni lo mnikelo.
Izichasiso zevidiyo yesannannis
Isifinyezo Sevidiyo Yekhompyutha ye-Canannis
1. Ummeli we-cannabis wase-Illinois nomthengisi wamasheya wangaphambilini uTom Howard uchaza ukuthi izinkampani zensangu zisebenzisa iToronto Stock Exchange (TSE) ukuzungeza umthetho we-Controlled Substances Act (CSA) futhi zibhale uhlu lwazo lwensangu ekuhwebeni kwe-US njengeNasdaq - ngokwesibonelo uTilray ( I-Daq: TLRY)
2. Ukuvikela ibhizinisi lakho le-cannabis, sicela ubuyekeze ukuxhumana nehhovisi lethu namuhla - Ucingo: (309) - 699-4691: Amabhizinisi e-cannabis abhekana nokungaqiniseki okuningi futhi ukufinyelela ezimakethe ezinkulu kuyisikhulu sazo.
3. I-CSA yenza kube nzima - uma kungenzeki - ukuba izinkampani zensangu zaseMelika zibhalise emakethe yamasheya ngenxa yokubulawa kwamacala kahulumeni avela ohlelweni I lwensangu.
4. ICanada ine-cannabis esemthethweni kusukela ngo-Okthoba 17, 2018, ngaleyo ndlela izinkampani ezinjenge-Aurora Cannabis ukuklelisa uhlu lwayo lwesitoko kuzo zombili i-TSE bese ibuye ibhale ku-Nasdaq.
5. Abaphathi bakaTrump abathathanga zinyathelo zokumisa ukuthengiswa kwamasheya e-cannabis aseCanada afana neTilary, noma i-Aurora, kodwa ngokuxoshwa kweJeff Sessions - singacabanga nje ukuthi ngabe uMnyango Wezobulungiswa noma Wezokuphepha kanye neKhomishini Yezokushintshana uzothatha izinyathelo zokunciphisa ukuhweba nge-cannabis stock.
6. I-TSE ayikakuvumeli ukufakwa kuhlu kwezinkampani ze-cannabis ezilawula impahla yase-United States ngoba yephula i-CSA ngaphansi komthetho wase-US, kepha iningi labasebenza esikhaleni se-cannabis bahlukanisa izinkampani zabo ukuze zivumele ukufakwa kuhlu kabili.
7. Ukufakwa kuhlu okubili kwamasheya e-cannabis kuvumela izinkampani ezisebenza e-United States nase-Canada ukuthi zibe semakethe NGAPHAMBI kokuba i-United States ilahle i-Cannabis e-CSA uma kuzokhishwa umthethosivivinywa ofana nalowo owenziwe u-Chuck Schumer eSenate. Ngakho qaphela.
8. Uma unemibuzo ngommeli weCannabis, xhumana nehhovisi lethu namuhla ngosizo lokuyixazulula nabameli bethu abasebenza nzima be-cannabis.
Izixhumanisi ezengeziwe zeCannabis Market Market
Nayi i-athikili enemininingwane yeForbes echaza ukuthi izinkampani zaseMelika zisebenzisa kanjani ukubonakaliswa kwazo kwaseCanada ukufakwa ohlwini lwezitoko zazo kuwo womabili la mazwe ukuze zilungiselele ukwenziwa ngokusemthethweni:
Kulomongo, izinkampani ezihlobene nentsangu ziyafika impela ebangeni eliphambili, ngama-ETF amakhulu amabili, i I-Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (I-OTC: HMLSF) (TSE: HMMJ) kanye ne I-ETFMG Isivuno Esihlukile se-ETF (NYSE: MJ) Ukuhweba ngamasheya amakhulu wokuhweba, namabhizinisi afana nomlimi wokhula I-Cronos Group Inc. (I-NASDAQ: CRON) ne-cannabinoid-based biotech I-GW Pharmaceuticals PLC- ADR (I-NASDAQ: GWPH) uhlu ku-Nasdaq, kanye Ukukhula kwe-Canopy ukuhweba kwi-NYSE.
I-Exceprt evela endabeni enemininingwane eminingi yaseBezinga maqondana nezinyathelo zokubamba iqhaza ekuhwebeni ngensangu yesitoko - njengesixwayiso esivela kumthengisi wangaphambili - amasheya e-OTC awawona uketshezi futhi anezinkinga zokuhweba ngokungena nokuphuma - uxwayisiwe kepha ngokuningi… funda konke lapha:
Ukwehla Kuya Kwezomthetho